चन्दाको सिद्धान्त (खण्ड-काव्य)
Biju Subedi — Thu, 10/05/2017 - 23:22
चन्द्र मोहिनी नै हुन् चन्दा पहिलो नजरमै दिल चोर्ने
क्षितिजको सपनी बिपनीलाई पनि भङ्ग पार्ने ।
क्षितिज भन्छ– “अब चन्दा मसँग जस्तोसुकै परीक्षा लेऊ
ज्यानै दिन तयार छु , आइदेऊ क्षितिजको छेउ ।”
Gokul Khadka — Tue, 10/03/2017 - 15:23
मेरो माया सुन हो
खिया लागेको कर्द हैन
पात जस्तो सुकी जान्न्न
कागज जस्तो च्यात्न हैन
मेरो माया हिरा हो
काँच जस्तो फुटी जान्न
भेल जस्तो बगी जान्न
फुटाउनलाई हाँडी हैन
एकदेव — Tue, 10/03/2017 - 14:16
आज देवमाया खुसीले गद्गद् छिन्।
अब देवमायाको परिवारमा खुसीको वातावरण आउनेछ। उनका छोराहरू घर फर्कँदै छन्।
देवमाया त्यो दिन अझै सम्झन्छीन् जब उनका छोराहरू एक-एक गर्दै पुर्ख्यौली घर छोडेर बाहिरिएका थिए। उनका छोराहरू सबै पौरखी छन्, आ-आफ्ना कार्यक्षेत्रमा अव्वल तथा दक्ष छन्, तर उनलाई आफ्नो गुँड कमजोर हुँदै गएको हेक्का थियो। उनको पुर्ख्यौली सम्पत्तिको नाममा भएको घर र घरसँगै जोडिएको पाखो बारी छिमेकीको अतिक्रमणबाट पेलिँदै गएको हेक्का थियो।
रंगहरु खोज्दै हिंड्दा, सादा जिन्दगीको
hangpal — Sun, 10/01/2017 - 02:36
रंगहरू खोज्दै हिंड्दा, सादा जिन्दगीको
बाटो काटें अनिंदो नै, आधा जिन्दगीको
यात्राभरी नमिलेको किनारहरू भेटें
छाँया उस्तै नदेखिने इनारहरू भेटें
सबै उस्तै हुन्न रैछ पाना जिन्दगीको
Pramod Dhungana — Mon, 09/25/2017 - 14:44
कसरी नभनुँ म तिमीसँग टाढा हुँदा
मन यो दुख्छ
आफ्नो नभन ठिकै छ मलाई त
मेरा लाेग्ने बिदेशमा छन्
केडी रेम्नीसीङ — Sat, 09/23/2017 - 18:41
"एउटा कुरा आज थाहा भयो, मातेपछि मान्छेको दया पलाउँदो रहेछ । अरु के केसम्म अरुलाई दिन तयार हुन्छन् म चाहिँ मेरो शरीरै अरुलाई सुम्पनु परे पनि तयार हुने रहेछु लागेपछि । तर भाइ तिमीलाई चाहिँ होइन है हा...हा...हा... । तिमीलाई त मैले उहिल्यै देखि आफ्नो भाइजस्तो मानेको छु, त्यसमाथि तिमी भन्या घरमा परिवार भएको मान्छे, हामीलाई के हेर्थिस् । बरु त्यो तिम्रो साथी बेरोजगार जस्तो छ त मिल्छ भने मलाई मिलाई देऊ न..."
"दिदी खास म पनि बेरोजगारै छु त ।"
dotpen — Sat, 09/23/2017 - 17:50
जस्को कतै घरै छैन, धमिरा कहाँ बस्छ र ?
प्रेमी जस्को छँदै छैन, वियोग कहाँ हुन्छ र ?
श्वर ज्ञान झिनो नै छ, कसरी बज्छ बाँसुरी ?
जस्को त ब्याग नै छैन, सुको नै पस्छ कसरी ?
ध्यानमा मग्न नैआत्मा, कसरी त्यो अशान्त छ ?
गन्दगी नै जहाँ छैन, झिँगा त्यहीँ कसरी छ ?
यो विकृतिलाई अब के गर्ने ?
HomSuvedi — Sat, 09/23/2017 - 17:47
मेरा एक जना अति नै घनिष्ट मित्रले मलाई थाहै नदिई “लौ बस्नु बाइकको पछाडि” भनेर मलाई लिएर कतै जानुभो । दशैंका भेडाजस्तो लागें म उनका पछि । गन्तव्य कता थियो मलाई केही थाहा थिएन । तर उहाँले भनेपछि नमान्ने मैले कुरै आएन । खुरुखुरु उहाँको बाइकको पछि बसेर उहाँले जता लानुहुन्छ त्यतै गएँ ।
आधा घन्टाको यात्रापछि म पुर्याइएँ एक यस्ता घरमा जहाँ ठुलो भीडभाड थियो । ओहो म ता कुनै राजनीतिक चुनावको प्रसारमा कुनै नेताको घरमा पो आएँछु कि ? अथवा कसैलाई सम्मान गरिने कार्यक्रममा पो आएँ कि ? या कुनै साप्ताहिक पूराण लागेको ठाउँमा पो आएँ कि ?
editor — Sat, 09/23/2017 - 14:20
ऊ आयो त्यसैगरी
जसरी आकाशमा सूर्य उदाउँछ
चिर्बिरेका गीतहरू गुन्जिए
प्रकृतिमा लहरायो रङ प्रीतको
मोतीदाना झै रुप त्यो शितको
छपक्क मायाले छोपिएर
ब्युँझिए प्रेमका तरङ्हरू ।
editor — Sat, 09/23/2017 - 14:15
सम्बन्ध नर्कको बाटों जस्तै
सुखमा हात थाम्ने
दुखमा लात मार्ने।
अविरल चल्ने ज्वारभाटा जस्तै
विश्वास अनि धोखा ।
editor — Sat, 09/23/2017 - 14:08
थोत्रो गाना गाउँदै कुद्छस् घरको छाना-छाना
ठीक् लागेन मुसा मलाई तेरो तानाबाना
बस्ने घर छैन तेरो मेरो घरमा बस्छस्
राति-राति हल्ला गर्छस् दिउँसो कुना पस्छस्
किताब काट्न, लुगा काट्न अघि सर्नुपर्ने
मेरो घरमा बसी मेरै अहिरो गर्नुपर्ने
कसैलाई भने यहाँ खाने गाँस छैन
सुन कहाँ छ?
बदल्नु त बदल्नु नै छ
न त हीरो....
जे देखे त्यो लेखे
शान्ति क्षेत्र - नेपाल
नमस्कार है नेताज्यू
बगिरहने खोला भइछ्यौ
गयो मेरो दशै ऋण थपेर
हुँदैन मायामा नाफाको कारोबार
थुक्क झाक्ने जिन्दगि
तिमी कति बैगुनी रहिछ्यौ
मेरो नयाँ नेपाल !!
आडमा बसी कठै भन्छौ त्यही हुन्छ छुरा
रूप र गुण
तिम्रो उल्लासमय वातावरणमा (सवाल जवाफ)
नेपालको राजनैतिक यो अबस्थ आइपुग्नुमा तमाम नेपाली जन्ता नै दोषी हो!
किताब (बाल कविता)